कोरोनापछि बेरोजगारीको डरलाग्दो चित्र : बाँझिएको कृषियोग्य जमिन फेरि हराभरा बनाउने अवसर – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Employement Opprotunity/कोरोनापछि बेरोजगारीको डरलाग्दो चित्र : बाँझिएको कृषियोग्य जमिन फेरि हराभरा बनाउने अवसर
कोरोनापछि बेरोजगारीको डरलाग्दो चित्र : बाँझिएको कृषियोग्य जमिन फेरि हराभरा बनाउने अवसर
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) कारण यति`खेर वि`श्व आक्रा`न्त छ भने यसैका कारण नेपालसहित विश्वकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको छ । कोरोनाका कारण चलायमान विश्व अर्थ`बजार ठप्प हुने अवस्था आएको छ ।
एक देशदेखि अर्को देशबीचको आयात निर्यात रोकिएको अवस्था छ भने उद्योग, कल कारखाना बन्द भएका छन् । जसले आजको दिनसम्म विश्वले खर्बौको नोक्सानी व्यहोरिसकेको छ ।को`रोनाकै कारण भएका उद्योग कलका`रखाना चल्न नसक्दा विश्वभरबाट झण्डै सवा खर्ब बराबरको रोजगारी गुमेको अवस्था छ ।
पछिल्लो एक अध्ययन अनुसार कोरोना कारण विश्वमा ६ जनामा एक जनालेले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । कयौं देशहरुले आफ्नो देशबाट विदेशी कामदारहरु कटौंती गरिसकेका छन् भने, कति देशले क्रमशः कटाती गर्दै छन् । यस्तो अवस्थामा विश्व श्रमबजारमा गएका लाखौं नेपाली युवाहरुले समेत रोजगारी गुमाउने खतरा बढेर गएको छ ।
हाल विश्वमा विभिन्न देशमा गरी झण्डै ७० लाखको हारहारीमा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यसमा करिब ७० प्रतिशतकै हाराहारीको संख्या मलेसिया र खाडी मुलुकमा मात्र रहेको बताइन्छ । कोरोनाका कारण तीव्र आर्थिक संक`टमा फसेको विश्वको दुर्दशाबाट खाडी मुलुक पनि अछुतो छैन । यदि यी मुलुुकहरुले समेत ठूलो मात्रामा रोजगारी कटौंती गर्ने नीति लिए भने नेपालीले पनि ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमाउने पक्कापक्की जस्तै छ । जसले हजारौं लाखौंं युवाहरु बेरोजगार बन्दै स्वदेश फर्किन बाध्य हुनेछन् । यसले मुलुकको वेरोजगारी समस्या झन् विकराल बन्नेछ ।
एकातिर मुलुकभित्र बेरोजगारी संख्या बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स समेत रोकिने अवस्था आएमा मुलुकको अर्थ`तन्त्र नै धरासायी हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र आफ्नै उत्पादन खो`ज्नु बाहेक केही उपाय रहँदैन । संकटको घडीमा उत्पादन बढाउन त्यसै बाँझो छाडेका पाखापखेरा फोर्नु, खनजोत गर्नु बाध्यता बन्नेछ । तर, यो समस्याको घडीलाई विज्ञहरु कृषिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’को रुपमा वि`श्लेषण गर्दछन् ।
आउन थाल्यो श्रमिकको माग: खाडी भन्दा पनि बढी युरोपेली मुलुकबाट आउन थाल्यो !
लकडाउन खुले लगत्तै ६ लाखलाई रोज गारी दिने ओली सरकारको यस्तो छ योजना !!!